समाचार Archives - खबर प्रवाह::Khabarprawaha.com समाचार Archives - खबर प्रवाह
काठमाडौं। पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की देशको पछिल्लो घटनाक्रम देखेर निकै चिन्तित भएको बताउछिन्। को नेता प्रधानमन्त्री छ ? कसको अनुकुल वा प्रतिकुल सरकार छ भन्ने भन्दापनी हजारौंको रगत र पसिना संग साटिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धरापमा पर्न लागेकोतर्फ उनको चिन्ता छ। पछिल्लो घटनाक्रमतर्फ संकेत गर्दै कार्की भन्छिन्, ‘मुलुकको अवस्था लुँडो खेलसँग मिल्दोजुल्दो छ। लुँडोमा मिहिनेत […]
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को प्रचण्ड–नेपाल समूहका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले अब लोकतन्त्र जोगाउन नेपाली कांग्रेससँग मिलेर संयुक्त आन्दोलन गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन्। शनिबार दाङको घोराहीमा प्रेस संगठनले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा नेता नेपालले लोकतन्त्र रक्षाका लागि लामो समयदेखि संघर्षरत कांग्रेस अब फेरि लोकतन्त्र जोगाउने जिम्मेवारीमा अग्रसर हुने विश्वास व्यक्त गरे। कांग्रेस […]
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आगामी माघ ११ गते आइतबार सन् २०१८ की ‘मिस मंगोल नेपाल’ ज्याङ्मु शेर्पासँग लगनगाँठो कस्ने भएका छन्। मुख्यमन्त्री राईको विवाहबारे उनको सचिवालयले पुष्टि गर्दै विवाहको मिति सार्वजनिक गरेको हो। उमेरमा निकै ठूलो अन्तर रहेको ज्याङ्मु र मुख्यमन्त्री राईको प्रेम विवाह हुने स्रोतले जानकारी दियो। मुख्यमन्त्री राईको पुर्खौली घर भोजपुर […]
काठमाडौं । नेकपाको केपी ओली समूहका नेता तथा सहरी विकास मन्त्री प्रभु साहले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबाट कम्युनिस्ट आन्दोलन र मुलुको समृद्धिमा बाधा खडा भएको दावी गरेका छन् । प्रदेश १ को ओली पक्षीय अगुवा कार्यकर्ता भेलामा उनले भने, ‘नेपालमा प्रचण्डजी स्थापित भएर आएपछि मुलुक अस्थिरताको भुमरीमा फसेको छ । कम्युनिस्ट आन्दोलन अन्यौलग्रस्त स्थितिमा छ । […]
काठमाडौं । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई बिवाह बन्धनमा बाँधिने भएका छन् । मुख्यमन्त्री राई यही माघ ११ गते बिवाह बन्धनमा बाँधिने उहाँको सचिवालयले जनाएको छ । उहाँको बिवाह भोज काठमाडौं र विराटनगरमा हुने निश्चित भइसकेको बताइएको छ । अमेरिका बस्दै आएकी युवतीसँग मुख्यमन्त्ती राई बिवाह बन्धनमा बाँधिन लागेको सचिवालयको भनाइ छ । काठमाडौंमा पछि […]
काठमाडौं । सीमा विवादको बिषय टुंग्याउने भन्दै भारत छिरेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली नक्सा नै परिवर्तन गरेर आफैलाई गिज्याएका छन् । तीन दिने भारत भ्रमणमा रहेका नेपालका परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भुमी फिर्ता गर्ने निर्णय भारतलाई गराउलान भनेर पर्खेका नेपाली एउटा चित्र हेरेर झनै तर्सिएका छन् । नेपाल-भारतको विवाद समाधानका लागि बिहीबार भारत प्रस्‍थान गरेका ज्ञवाली सहभागी भएको […]
काठमाडौं। राजनीतिक विश्लेषक डा. सुरेन्द्र केसीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पैसा दिएर भारतीय च्यानल जी न्युजलाई अन्तरवार्ता लिन लगाएको खुलासा गरेका छन्। डा. केसीले आफ्नो बेइज्जत गर्ने च्यानललाई नै ओलीले अन्तरवार्ता दिएकोप्रति विरोध समेत जनाए। केही दिन अगाडी उक्त च्यानलका प्रधान सम्पादक सुधीर चौधरी नेतृत्वको टोलीले अवैध रूपमा सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा प्रवेश गरेको पाइएको […]
चितवन । विश्वव्यापी महामारी कोभिड १९ का कारण विदेशमा निधन भएका मकवानपुरका २ नेपालीको परिवारलाई आईएमई ले आर्थिक सहयोग गरेको छ । साउदी अरबमा निधन भएका सोहन कुमार गुरुङ र तुल बहादुर कामी का परिवारलाई राहत स्वरुप प्रति परिवार ५० हजार रुपैयाँको दरले नगद सहयोग प्रदान गरिएको हो । हेटौडाका गुरुङकी श्रीमती विष्णु माया गुरुङ […]
अरूलाई अर्कै हतार, टोपबहादुरलाई एमसीसीकै हतार
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले मन्त्री पद पाएपछि एमसीसीको मुद्दा जोड्तोड़ले उठाउन थालेका छन् । पदभार सम्हालेको पहिलो दिनमै एमसीसी सम्झौता छिटो कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका रायमाझी बिबादमा तानिएपछि अहिले भने कुरा मिलाएर गर्न थालेका छन् । बुधबार काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा उनले एमसीसी लागु गर्ने अथवा खारेज के गर्ने भन्ने विषय छिटोभन्दा […]
समाचार ओली पक्षले बनाएका केन्द्रीय सदस्यले गरे धमाधम पद अस्विकार
समाचार रायमाझीको प्रश्न: प्रधानमन्त्री ओलीको मानसिक सन्तुलन गुमेको हो र ?
समाचार प्रधानमन्त्री ओलीलाई कारबाही गर्न नागरिक अगुवाहरूको अपील
समाचार शत्रुको गोलीले नढलेका योद्दाहरू ओलीको गुलियोमा फसे : नेता नेपाल
समाचार ओलीका नयाँ मन्त्री चाेरका साक्षी मात्र हुन् : भीम रावल
समाचार गृहमन्त्री बादल गोठमा बाँधेको भैंसीजस्तै हुन् : योगेश भट्टराई